गहुँको जमरामा भिटामिन ए, के, सि, र इ, थाइमिन, कोलाइन, आइरन लगायतका सयभन्दा बढि पोषक तत्वहरू भएकोले उक्त जमराको जुस नियमित सेवन गरेका मानिसको सरिरमा कुनै पनि रोग नलाग्ने योग प्रशिक्षक बताउछन । डा. जिएच अर्प थोमसले गरेको एक अध्ययन अनुसार गहुँको जमराबाट बनाइएको जुस एनिमिया, रगतको क्यान्सर लगायतका रोगको समेत निको हुने कुरा प्रमाणित समेत भइसकेको छ ।
गहुँको जमरामा पनि भिटामिन, खनिज, एमिनो एसिड आदी पाइन्छ । यसले विभिन्न किसिमकको भिटामिन, प्रदान गर्छ । जमराले कलेजमा भएको विशाक्त पदार्थलाई हटाउँन र ठूलो आन्द्रा सफा गरी शरीरमा स्फुर्ति बढाउँन, पाचन शक्ति मजवुत् बनाउँन, रगत सफा राख्न मद्दत गर्छ । क्यान्सरको उपचार लगायत विभिन्न किसिमका भिटामिन, इन्जाइम, खनिजलगायत महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्ने गुण र मासुभन्दा बढी प्रोटिन एवं शरीरमा चोटपटक लाग्दा छिटो निको गराउँने हुनाले मधुमेहीलाई फाइदा गर्छ ।
← प्राचीन मनु—जसबाट हामी ‘म्यान’ भन्ने अंग्रेजी शब्द पाउँदछौँ
जमराको रसको फाइदा →
अक्टोबर 5, 2018 साइन्स इन्फोटेक 3
सेप्टेम्बर 5, 2016 साइन्स इन्फोटेक किन चाउरिन्छ छाला? मा टिप्पणी गर्न मनाही छ